को बन्ला कमेडी च्याम्पियन ? फाइनलका टिकट बिक्रि खुल्यो - चारदिशा
को बन्ला कमेडी च्याम्पियन ? फाइनलका टिकट बिक्रि खुल्यो
March 10, 2020 चारदिशा देश
काठमाण्डौं – नेपालकै पहिलो स्ट्याड – अप कमेडी रियालिटी सो ‘कमेडी च्याम्पियन’ को ग्राण्ड फिनाले आगामी चैत १ गते हुँदैछ । त्यो सँगै टप ३ फाइनलिस्ट बाट पहिलो कमेडी च्याम्पियन को बन्छ भन्ने उत्सुकता पनि बढेको छ ।
टप ३ फाइनलिस्टमा इटहरीका सुमन कोइराला, रोल्पाका खड्गबहादुर पुन र धादिङका हिमेश पन्त पुगेका छन् । यी मध्य कोइराला र पुन वाइल्ड कार्ड मार्फत टप ३ मा पुगेका हुन् । दर्शकको भोटको आधारमा अहिलेसम्म रोल्पाका पुन अगाडि रहेको बताइन्छ ।
चैत १ गते हुने फाइनलको लागि लागि टिकट बिक्री समेत खुल्ला भै सकेको छ । यसको टिकट ई – सेवाबाट काट्न सकिने छ । कोरोना प्रभावका कारण कमेडी च्याम्पियनको ग्राण्ड फिनाले बानेश्वरस्थित च्यासल मैदानमा हुने तय भएको छ ।
विशाल भण्डारीले निर्देशन गरेको कमेडी च्याम्पियनमा सन्तोष पन्त, मनोज गजुरेल, प्रदिप भट्टराई र ऋचा शर्मा निर्णायक छन् । अभिनेत्री केकी अधिकारी, रिमा विश्वकर्मा लगायतको लगानी रहेको छ भने सो को होस्ट समेत विश्वकर्मा आफैंले गर्दै आएकी छिन् ।
के कोरोना भाइरसका कारण टोकियो ओलम्पिक स्थगित होला ?
आज ‘कमेडी च्याम्पियन’ फाइनल, को बन्छ च्याम्पियन ?